Bangaki abantu baseDashi abangakwazi ukukhokha izikweletu zabo ngesikhathi senhlekelele ye-corona? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-21 May 2020	• 16 Amazwana
Uma ulandela abezindaba, akunankinga neze eNetherlands ngaphandle kwegciwane le-corona, eliqhubeka likhala njengebhomu lesikhathi sokushaya. Buphi ubuntatheli uma kuziwa ngokuveza ukuhlupheka komuntu uqobo emuva kweminyango yangaphambili yabaningi? Akunzima kangako ukuhlaziya izibalo ze-RIVM nokugqamisa izinhlangothi ezimbili. Abezindaba abakhulu bavikela inqubomgomo kaRutte & Co. noJensen othi akukubi kangako. It uhlelo lwesikhathi eside wukuthi kuzoba nenye futhi imvuselelo ngemuva kwalokho kuzoqedwa isimo samaphoyisa futhi konke nomuntu okugxekayo kuzocaciswa konke. Kodwa kungani kungekho muntu onaka ukucindezelwa komuntu siqu noma kwezezimali?
Esebenza, wonke lawo mapakheji wokusekela amahle athembekile azokuba ngumbuzo wezinto zokubala, lapho uzothunyelwa khona kusuka ku-counter A ukuya ko-B. Ikakhulu, i Abangu-433.000 abazimele kuzoba yi-spool, ngoba ukwesekwa kwabo kwe-TOZO kusuka ngomhla ka-1 Juni kuzohlolwa kuze kutholwe imali etholwa umlingani bese kuba nje sekudlulile. Futhi noma ngabe uthola ukwesekwa, abaningi (kufaka phakathi abantu abangazisebenzisi) bangathola ukuthi ukwehla okuncane kwemali kungaba yingozi ekukhokheleni irenti. Uhulumeni uyabona ukuthi le nkinga iyahlehla, ngakho-ke uhlelo bekuwukubeka irenti yokuqasha yesikhashana, kepha lokho bekulokhu kunjalo Kajsa Ollongren torpedoed.
Lokhu kuhamba kanjani kwezepolitiki: ulayini obomvu usungulwe kudala, kepha nina nenza ngathi 'siyayenzela' noma 'siyamelana nathi'. Lokho kungukukhohlisa kwentando yeningi esiphila ngaphansi kwayo. U-Ollongron uthi indawo yokuqasha yenzelwe izinkampani zezindlu kuphela, ngoba banemali encane yokutshala imali ekwakheni okusha. "Ikhabhinethi ithanda ukunika abanikazi bendawo ithuba lokuhlinzeka ngezixazululo ezenziwe ngokwezifiso. Isibonelo, banganikeza abaqashi ukuthi bahlawulwe imali yokukhokha, bakhansele ingxenye yerenti ngemuva kwalokho noma banciphise irenti, ”kusho uKasja. U-Ollongren futhi ufuna ukwenza kube lula ukwehlisa irenti okwesikhashana. Umthethosivivinywa omusha ozoqala ukusebenza kamuva nawo wenza lokhu kwenzeke.
Omunye umthetho. Imithetho indiza ezindlebeni zethu, kodwa ekusebenzeni kuyasala ezinkampanini zezindlu ukunciphisa intela. Futhi cishe bazokwenza lokho ngentshiseko enkulu (hhayi).
Vele, izinkinga zangempela zinabantu abangasakwazi ukukhokhela futhi bangaba yinyanga eyodwa noma ezimbili ngemuva. Asazi ngoba akekho ocwaningayo. Ufuna ukugcina ukuhlupheka emphakathini ngaphansi kokhaphethi njengesizwe. Ukuncishiswa kwerenti kuhle, kepha wenzani maqondana nama-ejensi angaqoqeki nabasheyili ababeka amanani amakhulu phezulu kwama-akhawuntingi ase-overdue? Ukukhokha imali okuqashiwe kuyo inyanga kungasheshe kuholele kumakhulu ama-euro ngezindleko ezingeziwe, ukuze uzokwehla kakhulu ngemuva kwenyanga ezayo.
Bese kuba nokusabela kwe-chain ezinkingeni, lapho uthola khona ukunamathela ngokwezimali, lokhu kungaholela ngisho ekunakekelweni kwentsha nakho ukuza ubheke ukuthi ngabe izingane zakho azikwazi ukubekwa kangcono yini nomndeni wokukhulisa izingane, ngoba awusekho zinakekele.
Uma ukwehla kwemali (ngenxa yezigidigidi zama-euro) kuzoba nomthelela kumanani entengo ezitolo ezinkulu futhi uma kukhuphuka intela isikhathi eside, ngoba amaphakheji wosizo kufanele atholakale kwenye indawo, abantu abaningi bazongena enkingeni.
Kuliqiniso futhi bakhona abantu abaqhuba kahle. Labantu ngabantu abasebenzela uhlelo futhi abaqhuba yonke imisebenzi yokuqapha nokuphoqelela. Ungathola umsebenzi omuhle njengomhloli we-RIVM, lapho uzothunyelwa khona emgaqweni ukuyohlolela abantu i-corona noma ukubona ukuthi abantu banamathela emameleni nasigamu. Cishe kukhona amafemu okubonisana nawo abhekene ne-heyday, ngoba aqondisa izinkampani futhi azicebise ukuthi zingahlela kanjani inkampani yazo emphakathini owodwa wamamitha nengxenye. Uma bebaningi abantu abasebenzela uhulumeni, ohulumeni abancane noma izinkampani ezihlinzeka ngezinsizakalo ezihlobene nakho, abantu abaningi bazokuzuza ngokulawula nokujezisa iqembu elingasebenzi lolo hlelo.
Isikhathi esingakanani kuze kube yilapho amaDashi ezothola ukuthi lapho akekho useza ukuzosindisa? Abantu abasebenzela uhlelo bangahlala isikhathi esingakanani esibukweni ngaphandle kokuthola amahloni ajulile? Nokho, inqobo nje uma ungowabaningi, unganqoba isikweletu sakho ngokuhlangana noMeiland esikhundleni sokulwela izwe elikhululekile impela. Ngabe abantu bazothola nini ukuthi siphila ngentando yeningi yama-sham, lapho osopolitiki iminyaka eminingi besethula nje ngenkohliso yokuzikhethela, kepha balandele ngasese uhlelo olukhulu okumele luthinte abantu abaningi? Ukuphela kwendlela yokuphuma kwalesi simo inguquko yangempela, lapho abantu basebenzise amandla.
Lokhu kungenziwa ngentando yeningi eqondile. Kwentando yeningi eqondile, ongqongqoshe abakhethwe ngqo ngabantu babikela abantu. Banquma ngobuningi ukuthi imithetho iyapasiswa yini, umgomo omkhulu ukuthi akukho mthetho okufanele uhlaze noma uqede amalungelo ayisisekelo kumthethosisekelo. Ngakho-ke, konke okwephula ubumfihlo kanye nasemzimbeni nakumalungu ngeke kusebenze njengomthetho (ngisho nomthetho wokugoma okuphoqelekile). Intando yeningi eqondile ingafakwa ngabantu ngokungazinaki ezombusazwe ezingafanele futhi bakhe uhlelo olusha ngokwabo. Amakhulu ezinkulungwane kumele akhombise ukuthi afuna ukwenza lokhu. Kungakho kudingeka ukuthi sivukele futhi sikhombise ukuthi sifuna ushintsho. Awungeke uzuze inguquko yangempela ngokukhononda ngakho konke okungahambi kahle; ufinyelela lokho ngokwenza.
Ngakho-ke, siza ukuvula ushintsho lwangempela. Gxila kudemokhrasi eqondile futhi wabelane ngale webhusayithi kanye nezicelo zayo: www.fvvd.nl
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: bnr.nl, telegraaf.nl
Isimo seCorona: Kungathatha iminyaka emi-2 kuye kwemi-3 ukuphuma ekuvaleni ngaphandle kokuthi kulandele umkhondo nezinhlelo zokusebenza kusenesikhathi
Ukwehla okukhulu kwemali ngesikhathi senhlekelele ye-corona kuholela ekuphikiseni: ingabe i-bitcoin isisombululo?
Amathegi: ubunzima be-corona, i-coronavirus, afakiwe, ezezimali, indawo yokuqasha, ukuncishiswa kwerenti, izinkinga, uhulumeni, i-revolution, ukwesekwa, ukusekela amaphakheji, Tozo, uzisebenzele, zzpers
21 May 2020 ku-10: 25
Ukubalwa kwe-Facebook kwakamuva: usenabalandeli, kepha awusakwazi ukuthumela.
Kubukeka sengathi ikhasi lami le-Facebook seliphelile: Ngeke ngisakwazi ukuthumela lutho!
21 May 2020 ku-16: 48
Ngokusobala lokho bekuwukwehluleka kwezobuchwepheshe noma bakubuyisele emuva ..
21 May 2020 ku-12: 02
I-scamdemic kumele futhi izothuthukiswa ngohulumeni / nezinsizakalo zokuphepha.
Ekuvezweni kwezinyathelo zabo ezingenangqondo nezokungenangqondo
Abalindi. Abantu abavamile bavunyelwe
angazi amaqiniso futhi akufanele acabange. Amalungelo abantu ayephulwa, kepha ngakho-ke ngubani wonke oguqa emsebenzini kahulumeni kanye / noma abanye bonke abakhathazekile 'ngemisebenzi yabo' noma ngempilo yabo engahambisani nayo.
Ngenhlanhla siphila ezweni 'elikhululekile'.
Abantu basayina isicelo manje!
21 May 2020 ku-12: 15
Okungabonwa abaningi ukuthi le nqubo ihloselwe ekuhlanganisweni okuphelele kweNetherlands njengesifundazwe kwi-EUSSR. I-De facto, isivele ingaphansi kokuqondisa kwePolitburo eBrussels, kodwa lokhu kuphela kwesembozo seCorona kuqinisekisa ukuthi izingcezu zamaphazili zokugcina zingena endaweni yazo.
I-GDR yayiyi-harbinger. ukuzama lokho okuzokhishwa ezwenikazi laseYurophu. Manje usungabona ngokucacile ukuthi ubani olawula lesi sigaba sokushintsha, njengoba i-JFK isho, kungumshini ohlanganisa konke futhi osebenza ku “Lock Step”.
UStasi Merkel, ilungu le-Vestager le-Trilatal, uVon der Leyen, kanye neTimmerfrans babuke ngamehlo nangokuvuma. Isigaba sokuqashwa kwe-Stasi entsha (i-Eurogendfor) singaqala maduze.
21 May 2020 ku-15: 26
ngiyabonga Salmon! Ingxoxo enhle kakhulu,
UMongameli France ubene-Auditor esemqoka ebonakalayo.
KWADALWA (ngomzuzu 6; 19 ayinayo iGulag ayinayo i-KGB “Yet”)
Imizuzu 4; 03 I-Gigscard d'Estain yayazi kanjani
21 May 2020 ku-19: 52
wamukelekile Ikhamera! KwakunguMacron futhi owaphonsela inselelo i-Eurogendfor ngokumelene nenhlangano eqondiswe “aphuzi”. Ngemuva kwakho konke, kungu-test-test-test ...
21 May 2020 ku-15: 53
ikusasa, ukugxila nokuvumelana nezimo (fff = 666)
Isibonelo, kuthathwe izinyathelo ezibalulekile ekubambisaneni phakathi kwe-EUROGEND kinga kanye nomsebenzi we-CSDP, futhi kwenziwa uhlelo lokuxhumana ukwengeza ukubonakala kwe-EUROGENDFOR.
Lo nyaka, imiqondo ebalulekile yesikhathi esizayo, ukugxila nokuvumelana nezimo kuzobonakala ezinhlosweni esizibekele zona.
Enye yalezi zinhloso, futhi ebaluleke kakhulu, ukuchaza isimo sokuphasiswa kwe-EUROGEND kinga yesikhathi esizayo.
Lokhu kusho ukuthi kufanele sibheke ukusebenzisana kwezifunda kanye nokusebenzisana namaqembu angaphandle kwe-EUROGEND kinga, njengabalingani bezakhamuzi kanye neziphathimandla zasekhaya.
Ukusebenza ngokubambisana kusivumela ukuthi sifunde komunye nomunye.
Kulonyaka, iNetherlands iphinde futhi yengamele i-International Association of Gendarmeries and Police Forces ngeMpi Yezempi (i-FIEP) kanye ne-European Union Police kanye neCivital Services Training Programme (EUPCST).
Sizohlola ukuthi singakwazi yini ukwakha ukuxhumana phakathi kwalezi zinhlangano futhi sihlole ukuthi singasekelana kanjani ngendlela engcono kakhulu.
Leyo ndaba kungenzeka ukuxhumana ngesixhumi ne-FRONTEX kungasungulwa.
La maqembu akhethekile kufanele abe nezimo futhi alungele ukuthunyelwa ngokushesha ezimeni zobunzima. Kufanele zifake amakhono akhethekile adingekayo ezigcawini zokusakazwa esikhathini esizayo kwe-EUROGENDFOR.
Ngale ndlela singaphendula izinsongo zezwe kanye nezinselelo ngempumelelo.
Kuzoba nesidingo esengeziwe salokhu ngokuzayo.
Namuhla, imiqondo ebalulekile yesikhathi esizayo, ukugxila nokuguquguquka (fff = 666) ibaluleke kakhulu kunangaphambili.
22 May 2020 ku-12: 40
UMBIKO: I-EU Planning “Iphasiphothi Yokugoma” Kusukela ngo-2018
I-"Roadmap on Vaccination" ibeka uhlelo lweminyaka emithathu lokukhulisa "ukuzethemba komgomo" kanye nokwenza "ukulandela ngomkhondo ngogesi"
21 May 2020 ku-12: 45
Iningi belilala iminyaka edlule futhi liphekelwe emaphethelweni ngamasudu ukuthi ngibe nesikhathi esinzima ngicabanga ukuthi kuzotholakala isisombululo esisebenzayo ngesikhathi sento ebilokhu iqhubeka phambi kwabo amashumi eminyaka.
Kungcono ukugxila esizukulwaneni esizoba nzima kakhulu ngalesi sikhathi. Ngokufanele isizukulwane uZ, abafundi abanezikweletu ngaphandle kokubuka.
21 May 2020 ku-13: 51
… Kuze babe emnyango wakho wangaphambili:
UDe Jonge: 'Ukuphoqelelwa ukuhlala yedwa kunqubomgomo entsha yokuhlola ayihlanganisiwe'
Uma lezo zinguquko zingahambanga ngeze, uhulumeni ubona lokho:
21 May 2020 ku-14: 16
UPalantir uthatha ezinye izinkontileka ze-COVID-19, kulokhu ne-VA
I-Apple ne-Google yethula isaziso sokuchayeka, ukunika amandla abaphathi bezempilo yomphakathi ukukhipha izinhlelo zokusebenza
22 May 2020 ku-00: 40
Nazi izinyathelo eziyi-10 okufanele uzisebenzise, ​​uma ufuna ukuguqula igciwane elingalapheki libe ukubanjwa kwamandla komhlaba
1. Qala ngegciwane elingachazwanga kahle, engeza isivivinyo esinganembile kulo, futhi ukhuthaze abantu abaningi abagula kakhulu noma abagulayo kakhulu ukuthi baphinde bahlolwe baze bahlolwe ukuthi banalo yini iqiniso.
2. Bika amanani akho aphezulu okufa angenakugwemeka futhi ungacaci ukuthi ngabe laba bantu bafa NGEGciwane noma bamane nalo.
3. Dala 'impendulo' 'kusimo esibucayi' esidala inethiwekhi enkulu yezinyathelo zokugunyazwa, ezinye zazo ebezihlelele isikhathi eside, futhi yidlanzana nje kuphela elingaba nesicelo sokuvimbela ubhubhane. (Qiniseka ukuthi ukhansele ukhetho kuze kube yilapho lukhona olunye ulwazi futhi ukwandisa kakhulu amandla okuboshwa nokubhekwa)
4.Vala izibhedlela zakho kubo bonke kodwa kube 'ngamacala amakhulu'. Khansela ukuhlinzwa okukhethiwe, ukucwilisa izinso, ukwelashwa komdlavuza, ukubonisana okuvamile kwe-GP nakho konke “ukunakekelwa kwezempilo okungekhona okuphuthumayo”. Ngakho-ke, ukwanda kwezimbangela zokufa kungavuleki ngokuphelele.
5. Shintsha imithetho yakho ngezindlela eziningi ukuze uvumele cishe konke lokhu kufa okusha kudlule amasheke ajwayelekile namabhalansi futhi kutholakale kalula njengokuthi 'kuhlobene ne-covid-19', kungaba nokuhlolwa okungalungile noma ngokumane ngokuthi 'ukwethulwa kwezifo'.
6. Uma kwenzeka abanye abeye ezindlini bezindela ukuhambisana nalokhu, bashintshe umthetho wokuvumela i-MD eyodwa, okungenzeka ukuthi ayikaze imbone nesiguli okukhulunywa ngaso, ukuthi ihlole i-covid19 ngokubona kwayo.
7. Bika amanani ashaqisayo 'wamacala amasha' owatholayo ngenxa yalokhu kuxhaphaza, njengobufakazi bokuthi izindlela ezintsha zegunya zibaluleke kangakanani 'ekusindiseni izimpilo'.
8. Unganaki nhlobo nehlazo lokwethula okuphoqelekile Ungagxili (i-DNR) kunoma yikuphi ukubonwa kwabantu okuthola njengabadli abangenamsebenzi. (Uma inselelo ikhulunywa ngokuhlupheka kwabantu, izinsiza ezinqunyelwe zokunakekelwa kwempilo kanye nama-ventilators)
9. Ungakhohlwa ukufaka noma yikuphi ukufa okulandelayo emathothweni e-covid19.
10. Qiniseka ukuthi abezindaba babiza noma ngubani obuza noma iyiphi ingxenye yalokhu ngokuthi 'itorist theorist'.
28 May 2020 ku-12: 42
Ukwengamela okuhle! Kepha kunesinye isici esibalulekile, somnotho noma sezezimali:
Qinisekisa ukuthi noma yiliphi ibhizinisi elinabanikazi abazimele liyabhidlika ukuze wonke amabhizinisi nokwenziwayo kungokwalabo abancane abalawulayo. Ngakho-ke kwakheka uhlobo lobukhomanisi lobungxowankulu. Impela le yi-ajenda eseyenziwe amashumi eminyaka, kepha lesi sinyathelo esiyisinyathelo sokugcina sokuqothula bonke abaninimabhizinisi abancane abazimele.
Isibonelo, umuntu angacabanga ukuthi ungqongqoshe wethu wezamasiko van Engelshoven akayona inhlakanipho enkulu njengoba ebonakala engakwazi ukuqonda ukuthi imboni yamasiko eNetherlands ingxenye enkulu AKUFANELE ukuthi axhaswe ngemali kepha idalwe ngabazimele. Njengoba ungqongqoshe ezosiza kuphela ngokwezezimali amaqembu axhaswe ukusindisa isigaba samasiko, abantu abaningi bacabanga ukuthi uyisiphukuphuku kakhulu ukuqonda ukuthi umsebenzi wethu wezamasiko usebenza kanjani. Kepha ingabe uyisiwula ngempela lesi noma umane nje unamathela ku-ajenda yokuqothula konke okwenziwa ngasese? Umbuzo ongasho lutho ...
23 May 2020 ku-10: 41
Okuhlekisayo ukuthi usho i-martien meiland esihlokweni sakho. Bengilokhu ngizibuza isikhashana ukuthi lelo gama laqokwa / laqokwa yini ngobunono. Inomsindo ofanayo negama lakho. Kungahamba kuze kube yilapho lokhu sekwenziwe ngenhloso yokuxhuma igama lakho kubantu ngokungaziwa kumlingisi ongeyena uMartien Meiland?
Ngisho ne-crazier; IMeiland inemibala emibili eyehlukene wamehlo, umphumela we-chimeric esithombeni ...
23 May 2020 ku-16: 48
I-d coupet ye-coup coup yezezimali ichaze, ifanekisela okwenziwa dummies:
27 May 2020 ku-16: 11
manje sekuqhubeka futhi ukwehla kwezezimali sekuqaphelekile. Izitena zokuqala ziyabonakala endaweni yase-EU, i-Central Central Bank yaseGerman ibekelwe eceleni ... ayilondolozekanga
I-EU ifuna ukwaba enye imali eyizigidi eziyizigidi ezingama- 750 XNUMX zamaRandi ukulwa nalesi simo esibucayi
Okuhlukile: I-ECB ilungiselela okubi kakhulu - impilo ngaphandle kweBundesbank
« Ngeke usakwazi ukungena esitolo uma unganikeli igama lakho nenombolo yenceku kwikhawunta futhi lokho kumane nje kuyisiqalo
UMaurice de Hond uthola ukungabi nalutho kwemizuzu eyodwa nohhafu (ividiyo) »
Ukuvakasha okuphelele: 2.508.192